Moto Emblem Magamba, mutsva weNintendo mutambo unowanikwa muna Kukadzi 2 | IPhone nhau
Zvinotaridza kuti Nintendo ichaunza pane vimbiso yayo. Mushure mekuvhurwa kwemanyepo-mutambo Miitomo uye Super Mario Run iyo vazhinji vedu taizokumbira kuve neine mukurumbira uye kwete kungobata skrini kuti Mario asvetuke, muJapan mutambo mutambo Yakazivisa zviri pamutemo chii Fire Emblem Heroes icharova App Store neGoogle Play nhasi 2 yeFebruary, kana zvakafanana, mumavhiki maviri chete.
Moto Emblem Magamba izita rekuremekedza iro sanganisa mutambo-wekutamba mutambo nehurongwa mutambo uye chiri chikamu cheMoto Emblem zvakasikwa izvo zvatakaona kekutanga pane fungidziro 8-bit koni Nintendo kana NES muna 1990. Vashandisi vachakwanisa kukwirisa ivo protagonists vachiri kurwa zvine hungwaru hondo, iyo, mumaonero angu, Iyo inotikumbira isu kupfuura yakapfuura Nintendo mutambo wakarova iyo App Store.
Moto Emblem Magamba ari kuuya kungori mavhiki maviri kubva zvino
Sekureva kwaNintendo, mutambo uyu unosanganisira maficha nyowani, pamwe ne yekutanga nharo iyo ichatarisa kumatunhu maviri anorwisana ayo misiyano iri kukura. Tichafanirwa kutora chinhanho chevadaidzi, vanozodaidza vanhu vakasiyana kubva kuMoto Emblem kuti vatore chikamu muhondo dzinoshamisa.
Mepu yega yega ichaita kunge bhodhi ine 8 × 6 makwere yakagadzirirwa kukwana pachiratidziro cheedu iPhone kana Android chishandiso. Iri mune iri bhodhi rerudzi apo vatambi vanofanirwa kutora chikamu muhondo yehunyanzvi nevazhinji vanobatana nevavengi.
Kugona kutamba nemazvo pa smartphone, Nintendo ane akagadzirisa madhairekitori kuti ave nyore, sekukweva mubatsiri kuenda kumuvengi kunorwisa. Tichawana kukunda kana vavengi vese pamepu vabviswa. Iyo hofori yeJapan yemitambo inoti kunyangwe iwo madhimoni ari akareruka, vateveri venhevedzano vanowana Moto Emblem Magamba akasimba sezvavaigona kutarisira.
SaSuper Mario Run, Moto Emblem Magamba uchave mutambo mahara nekutenga kwe-mu-app, zvinoreva kuti tinogona kuvhura zvimwe zvemukati kuburikidza nekubhadharisa kwakanyanya kukosha kana ma micro-kubhadhara akati atichatenga nawo zvinhu zvinotibvumidza kushanduka nekukurumidza. Ndinovimba kana Moto Emblem Magamba achirova maappo ezvitoro zvichaita saizvozvo kuti ugamuchire ongororo zvirinani pane yazvino mutambo waMario.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Moto Emblem Magamba, mutambo mutsva weNintendo weIOS unowanikwa muna Kukadzi 2
Ini ndashungurudzika nemhando iyi yemutambo .. Haugone kuwana mahara mitambo? Kwamunogona kubata hunhu nezvimwe kwese kwaunoda 🙁